10 Ukuma okumangalisayo eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Ukuma okumangalisayo eYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Iimbono ezintle, iilali ezingaqondakaliyo, iinqaba ezishiyiweyo, yaye izindlu ezingaqhelekanga, la 10 Ukumisa okumangalisayo eYurophu kunokufuna ukolula ukuhlala kwakho, kodwa balufanele ngokupheleleyo utyelelo.
1. Izitishi ezimangalisayo eYurophu: Rakotzbrucke, Jemani
Ifihlwe kwipaki encinci eSaxony, iBridge kaMtyholi, ekwabizwa ngokuba yiRakotzbrucke, luxabisa ngokupheleleyo uhambo olucelomngeni olusuka eBerlin. Ibhulorho enamatye ajiyileyo ukusuka 1860, ngumbono obangela umdla kwaye unike umdla abahambi ngenxa yokumila kunye nolwakhiwo lwawo olulodwa. Izikhonkwane ezibukhali kwicala ngalinye kunye nebhulorho ejikelezayo kakhulu, zijongeka ngokungathi zenziwe ngusathana ngokwakhe, kodwa eneneni zonke zenziwe ngabantu.
Ngaphezu, amabali athi amadoda akha le bhulorho njengomnikelo kumtyholi ngelo xesha, kodwa namhlanje yindawo nje enomlingo. Akukho zinto zininzi zokwenza kufutshane, ngoko ke kungcono ukudibanisa ukutyelela eRakotzbrucke kunye nohambo oluya eKromlau park.
2. IChampagne-Ardenne, Fransi
Iintlambo ezichumileyo nobude obungenasiphelo bezidiliya newayini emhlophe. ke, ukutyelela iChampagne-Ardenne kunokuba yindawo entle yokumisa kuhambo lwakho oluya eItali indawo yewayini, Tuscany. Ilizwe le-champagne liphakathi kweParis neLorraine. ngoko ke, ukumisa kwenye ye izidiliya ezinkulu eChampagne-Ardenne inokuba lulongezelelo olukhulu kwi-a amantombazana’ uhambo ku Paris.
Ngaphezu, kuba likhaya lechampagne etofotofo ekhazimlayo, lo mmandla unembali ebalulekileyo ebalulekileyo. Umzekelo, uJoan omangalisayo waseArc wavela kwidolophana yaseDomremy. ke, mhlawumbi uya kuva amabali amangalisayo ngelixa ungcamla iwayini kwisidiliya esihle saseFransi. Okukwintsusa, IChampagne-Ardenne yenye ye 5 ezona ndawo zimangalisayo zokumisa eFransi.
3. Izitishi ezimangalisayo eYurophu: Inqaba yaseOberhofen, Swizalend
Kunxweme lwe ichibi elihle elastiki, Inqaba yeOberhofen yenye yeenqaba ezimangalisayo eSwitzerland. Inqaba yeOberhofen iphakathi kweBern, Interlaken, kunye neLake Lucerne. ke, ukutyelela kwinqaba yase-Oberhofen kunye neLake Thun yindawo emangalisayo yokumisa kwindlela ende entle.
Ukwengeza, I-castle-turned Museum eyaqala ngenkulungwane ye-13 inegadi emangalisayo apho unokuncoma imithi emininzi engaqhelekanga., iintyatyambo, kunye nemibono yeeAlps. Ngaloo ndlela, ungajika uhambo lwesiqingatha sosuku lube luhambo lwemini epheleleyo ukuya eOberhofen, kunye nepaki entle ekufutshane ukuze ufumane ukuzola okuzolileyo kunye nemibono ebukekayo, ngelixa izihlwele zikhawuleza ukuya eLucerne.
4. Vorarlberg, Ostriya
Ukujonga iLake Constance entle, IVorarlberg idume ngechibi layo elidumileyo kunye nemibono yeentaba. Idolophu yaseOstriya ikumazantsi eVorarlberg, entle Ugcino lwendalo yeentaba ezinkulu, kunye neendlela eziluhlaza. Nokuba uhamba usuka eLiechtenstein usiya eOstriya okanye eJamani, IVorarlberg yindawo yokumisa emangalisayo kuhambo lwakho lukaloliwe kulo lonke elaseYurophu.
Isidlo sakusasa sentaba, okanye impelaveki ezolileyo kwindalo phambi kwesixeko esixakekileyo, kufuneka wenze ixesha leVorarlberg. Le dolophu ayaziwa kakhulu kubahambi, kunjalo, I-Vorarlberg kulapho unokufumana khona inkcubeko yase-Austrian kunye nokutya. Ngaphezu, uya kurhangqwa zezona ndawo ziphefumlayo zaseOstriya, emizaneni, yaye umbono obukekayo – eyona Austria ilungileyo inokunikela, kude neendawo zokhenketho.
5. Izitishi ezimangalisayo eYurophu: Freudenberg, Jemani
Idolophu emnandi yamaxesha aphakathi eFreudenberg yenye yeedolophu zaseJamani, kunye needolophu ezintle kakhulu zaseYurophu. Eyona nto inomtsalane apha 80 okanye izindlu ezimhlophe ezenziwe ngamaplanga, ujongeka umhle ngakumbi ebusika. Ngaloo ndlela, uhambo ukuya Freudenberg ikhephu-igqunywe yi awayengenakuyilibala, leyo eya kukubuyisela umva ngexesha nakumazwe eentsomi.
Ngaphezu, IFreudenberg imi phakathi kweenduli eziluhlaza, nge 160 km ye bentaba kunye neengcebiso ezinkulu. Ummandla waseWestphalia uyathandeka entwasahlobo xa yonke into iluhlaza kwaye iyadubula. the 6 iiyure uhambo lukaloliwe ukusuka Berlin ixabisa ngokupheleleyo, for a glimpse of one of the most iidolophu ezindala ezinomtsalane e Germany.
6. Indlela yeGiant’s Causeway, enorthern Ireland
Iimbono ze-over 40,000 Iikholamu zebasalt ezinehexagonal ezehlela kulwandlekazi oluluhlaza kwiGiant's Causeway zibukeka ngokwenene.. Imimangaliso yendalo ingaphezulu kweminyaka eyi-6o yezigidi ubudala, iyafikeleleka ngokuluhlaza, bomvu, kunye neendlela eziluhlaza. Ngemilo yabo ekhethekileyo, ezi kholamu zibeka i-Giant's Causeway ekunene nge 7 ezinye izimanga zehlabathi.
ngoko ke, akuyomfuneko ukuthetha, i-Giant's Causeway yenye ye 10 ezona ndawo zimangalisayo zokumisa eIreland. Nokuba uhamba usuka eBelfast okanye eDublin, yenza ixesha lokwenza oku uhambo olumnandi lwemini kuMntla Ireland. Ijikelezwe ziindawo eziluhlaza eziluhlaza zaseIreland, nolwandle oluluhlaza ezinyaweni zalo, Inyathelo ngalinye kule kholamu yentaba-mlilo liya kukusondeza kuhambo lwakho lokufumana eyona nto ibalaseleyo kunye neyona ibalaseleyo emhlabeni..
7. Izitishi ezimangalisayo eYurophu: Zermatt, Swizalend
IiAlps ezinkulu zinkulu kangangokuba nayiphi na indawo okhetha ukuma kuyo iya kuthatha umoya wakho. kunjalo, akukho nto ifana neembono ezimangalisayo ze Swiss Alps kwi Zermatt. Ngelixa iZermatt idume ngokutyibilika kwayo okumangalisayo, ibonakala intle entwasahlobo nasehlotyeni.
I-Zermatt likhaya kwenye ezona ntaba zibukekayo eYurophu, Matterhorn. Ngelixa ikhangeleka inobungangamsha kwaye ikude ukufikelela, Ubuhle bukaZermatt luhambo lukaloliwe kude neBasel, Bern, kunye neGeneva. ke, unokuza impelaveki okanye wandise ukumisa kwakho okufutshane ukuya kwiholide ekhumbulekayo kwiiAlps zaseSwitzerland.
8. Alberobello eItali
Uya kuthinjwa yiTrulli engaqhelekanga, kwindawo emangalisayo yaseSalento. Amakhaya e-Conical ane-facade emhlophe kunye nophahla oluhonjisiweyo lubuyela kwixesha leBronze. Ezi zakhiwo zikhethekileyo bekufanele ukuba zezokwexeshana, kodwa abaninzi baye basinda kwixesha nemozulu, kwidolophu entle yaseAlberobello. IAlberobello yenye yezona dolophu zibalaseleyo kuMazantsi eItali, kunye nokumisa okukhulu ngakunxweme lwaseItali.
Ngelixa le dolophu incinci, ungahamba ngokulula ukuya kwi-Alberobello kunye ne-Trulli zone ngoololiwe bengingqi. Le ndlela, unokwenza iindawo ezimbalwa zokumisa kwezinye iidolophu ezinomtsalane, njengoLecce wamandulo, elwandle bari, kunye neTrani. Ukwengeza, ezi dolophu zibalaseleyo zincinci indlela ebethiweyo e-Itali kwaye akukho zihlwele zabakhenkethi.
9. Izitishi ezimangalisayo eYurophu: I-Beaulieu-Sur-Mer Village yaseFransi
Phakathi kweMonaco kunye neNice, kwiRiviera yaseFransi emangalisayo, IBeaulieu-sur-Mer yindawo entle yokumisa ecaleni kolwandle kwaye utsibe ukuze uhlaziyeke kuLwandle lweMeditera.. Iilwandle zabucala, iivillas zodidi, kunye neembono ezinkulu ze-Saint-Jean-Cap-Ferrat peninsula, ayiphuphi ngaphezu koku eYurophu.
Ukongeza kwiBeaulieu-sur-Mer, zininzi iindawo zokumisa eziphefumlayo ecaleni kweLes Corniches, iindlela zamawa ecaleni kweFrench Riviera. I-30-km drive iqala eNice kwaye iphele eMenton, enye ye iindawo ezinemibala kakhulu eYurophu. Ngoxa i-30-km kuphela, kukho ubuncinane 10 iindawo zokumisa ezimangalisayo kule ndlela intle yaseYurophu.
10. Giethoorn, inetherlands
Umhlaba wezindlu ezifulelwe ngengca kunye 170 iziqithi, Giethoorn is a ilali engaqondakaliyo e Netherlands. Ngaphezu, ukuthatha kunye nemijelo, ngaphantsi kweebhulorho zokhuni, ijikelezwe yimihlaba eluhlaza kunye neentyatyambo, ngamava ongasokuze uwalibale.
Ilali encinci yaseGiehoorn enomtsalane kwi Ipaki yelizwe I-Weerribben-Wieden yindawo yokumisa emangalisayo kuhambo olunqumla eHolland. Ngelixa le dolophana ingumkhenkce ngenkulungwane ye-18, enkosi kule mihla Ukuhanjiwa kawonke-wonke, ngoku ungafika eGiehoorn usuka eAmsterdam ngaphantsi kwe 2 iiyure.
Thina Gcina A Isitimela Ndingakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya kwezi 10 zokumisa emangalisayo eYurophu.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposi yethu yebhlog ethi "I-10 Ima okumangalisayo e-Yurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Famazing-stops-europe%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
AmazingStops amazingstopseurope misa StopsInEurope ojikelezayo